डा. लालित कुमार मिश्र - कान्तिपुर समाचार
अचेल दिनहुँ जसो कुने न कुनै प्रकारको परीक्षा चलि नै रहेको हुन्छ । चाहे त्यो स्कुलको होस या मेडिकल ईन्ट्रान्स, कोरियन वा जर्मन या अग्रेजी भाषाको परीक्षा नै किन न होस । परीक्षार्थीहरुको बीच हाल परीक्षाकै बारेमा कुरा चलिरहेको हुन्छ । अभिभावकहरु पनि आ-आफ्नो परिक्षार्थी (छोरा-छोरी) हरुको परीक्षालाई लिएर चिन्तित् छन् । कसरी यिनीहरुको परिक्षा राम्रो होला भनेर ।
शरीरबाट पसिना निस्किनु एक स्वभाविक प्रकृया हो । यसले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्दछ र स्वच्छ वायु शरीरमा पुर्याउछ । पसिनाको माध्यमले शरीरभित्र भएको बिकार बाहिरआउछ । शरीरबाट पसिना निस्केन वा कुनै कारणबस पसिना भित्रै रोकिन गयोभने धेरै प्रकारका शारीरिक रोगहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ।
डा. लालित कुमार मिश्रका लेखहरु :
कान कराऊनु वा बज्नु भनेको त्यस्ता ध्वनिहरु सुन्नु, जुन शब्द वस्तुतस् उत्पन्न नै भइरहेको छैन । यसलाई अंग्रेजीमा 'टाईनिटस' भनिन्छ। जस्तै : धन्टी बज्नु, छालऊर्लेको आवाज, स्याँ-स्याँको आवाज, सिठी बजेको, गित गुनगुनाएको वा अरु नै प्रकारका आवाजहरु कानमा निरन्तर वा बन्द हुँदै आउँदै गर्छन् । यस किसमको आवाज एक वा दुबै कानमा सुनिनसक्छ।
अचेल पुरुषहरुमा पनि "एन्ड्रोपाज" फैलिंदै गईरहेकोछ । यसले व्यक्तिको पारिवारिक जीवनलाई नै तहस नहस पारिदिन्छ। पुरुषहरुमा हुने रजोनिवृति जसलाई "एन्ड्रोपाज" या "हाईपोगोनाडिज्म"को नामले चिनिन्छ । प्राय चालिस वर्ष उमेर पार गरेका पुरुषहरुको झुकाव यौन सम्बन्धतिर अझबढि हुन जान्छ । शोधकर्ताहरुको भनाईनुसार- तीस बर्षको उमेर पछि पुरुषहरुमा एन्ड्रोपाजको सुरुवात हुनथाल्छ ।
रिस एक नकारात्मक मनोभावना हो । रिसको बाहरी तथा व्यवहारिकरुप भनेको कसैमाथि हमला वा आक्रमण गर्नु हो । रिसलाई सोझै देख्न सकिंदैन । तर, रिसाएको छभने थाहा हुन्छ । कुनै मानिस रिसाएको छ भन्ने कुरा उसको आक्रामक व्यवहारबाट थाहा हुन्छ । रिस मुलतः एउटै भए पनि यसका अनेकौ रुप छन् । दुख, द्वेष ईत्यादि रिसका बिभिन्न रुप छन् । रिसको प्रदर्शन तुरुन्त हुन न सकेमा यो दुख, द्वेषको रुपमा रहिरहन्छ र व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रुपले रोगि हुन जान्छ ।
शायद कुनै व्यक्ति नहोला, जसको जीवनमा कहिल्यै टाउको नदुखेको होस् । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा एक न एक पटक टाउको दुखेको समस्याबाट अवश्यपनि गुज्रिनु परेको हुन्छ । वास्तवमा टाउको अरु कुनै रोगको कारणले दुख्ने गर्दछ । जसलाई अग्रेजीमा 'हेडएक' भनिन्छ । यो आफैमा कुनै छुट्टै रोग होइन । अत्याधिक व्यस्त दिनचर्या, तनावयुक्त जीवन, भाग दौड, गलत आहार-विहारका कारण अचेल टाउको दुख्नु साधारण भएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी (निजी) अस्पताल तथा नर्सिंगहोमहरुमा दिन प्रतिदिन बढि रहेको सिजेरियन डिलेभरीको संख्यात्मक बृध्दिदरले अधिकांश महिलालाई अप्ठयारोमा पारिदिएको छ । विवाहित सवै महिलाहरु गर्भवती भएको अवस्थामा यही चाहन्छन कि मेरो प्रसव प्रकृतिक रुपमा स्वभाविक किसिमले होस् । अपरेसन गर्न नपरोस । तर, यो कुरा आधुनिक चिकित्सामा सधै र सबै गर्भवती महिलाका लागी सामान्य प्रसव गराउन संभव हुँदैन र छैन पनि ।